Cuevas Andalucía - Cueva Manzana con piscina compartida - I-Airbnb
Ngeholide eyimpumelelo, amava kukuphila kubathandi bokuzola kunye nokunyaniseka.
"Cuevas Andalucia" inika i-gîte enhle, engaqhelekanga, i-troglodyte ehlala kwi-ecological estate olive-growing estate nayo yonke intuthuzelo ngomoya wokhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva.
Buyela kwiziseko, ukuzola kunye nokunyaniseka kuqinisekisiwe.
"Cuevas Andalucia" yindlu encinci yezindlu ze-5 zemiqolomba enedama lokudada ekwabelwana ngalo nayo yonke indawo yokuhlala.
Manzana umqolomba abantu ababini
Umphezulu: 45 m2 - Amagumbi: 3 - Igumbi lokulala: 1 - Igumbi lokuhlambela elineshawa eyi-1 - igumbi lokuhlala - igumbi lokutyela - ikhitshi elixhotyiswe - i-terrace ene-barbecue - Ichibi lokudada ekwabelwana ngalo.
Ukwakhiwa kwe-ikholoji kwipropati ekhethekileyo nedume kukhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva lwendalo.
Iphondo: Granada (Andalusia)
Amava kukuphilela abathandi bokuzola nokunyaniseka.2.
Uya kufumanisa ukudityaniswa okugqibeleleyo kwezinto zethu zokuhombisa.
Ubukho bonke bemibala efudumeleyo, impahla yemveli kunye nesitayile, kunika eli gumbi lomqolomba umlingiswa walo okhethekileyo kwaye osebenzayo.
* (Ilinen yokulala, iitawuli, amandla, iinkuni, i-intanethi, ukufikelela echibini (ixesha lonyaka) kunye nokucoca okokugqibela kuqukiwe)
Ulwahlulo kunye nokuvunywa: "vivienda de turismo emaphandleni de alojamiento no compartido" n ° VTAR / GR / 00640.
Ipropathi egqwesileyo yokulima iminquma ephilayo eneendawo zokulala ezi-5 zasemaphandleni.
Ukhenketho olunoxanduva kunye nendalo yasemaphandleni, ukuzola, ukunyaniseka, indawo yokuqubha ngexesha lonyaka, yonke intuthuzelo, ukuhombisa ngononophelo, amaxabiso anciphayo ngokuxhomekeke kwixesha, ithala elikhulu, ulwakhiwo lwamva nje, imvume, izilwanyana zasekhaya, indawo yokuhlala engaqhelekanga, amanye amandla, indlu enendawo ephantsi yendalo, usapho kunye nomoya wobuhlobo kunye nabanini.
Ukuphakama: 800 m
Ikhitshi enesitovu segesi, i-oveni yombane, ifriji enendawo yokukhenkceza, umenzi wekofu, itoaster, iketile, izitya kunye neetawuli zeti - Igumbi lokuhlambela: Ishawari - Multimedia: TV, cable / satellite, Internet Wifi, DVD, stereo, outlet television.
Abantwana: ibhedi, isitulo sana.
Umatshini wokuhlamba, i-vacuum cleaner, i-iron, ibhodi yoku-ayina, amashiti kunye nelinen efakiweyo, i-air conditioning yendalo, ukufudumeza, ukufudumeza iinkuni, imidlalo yebhodi, iincwadi.
Isitiya: 8.5 yeehektare, ihlathi lomnquma, ityuwa kunye nechibi lokudada elingenaklorin enolawulo oluzenzekelayo lwe-PH ukwabelana kunye nokungatshisi, kungagqunywanga, ngocingo.
Ukupaka: ngokudibeneyo kwaye simahla
Ifenitshala yegadi, izitulo zomgangatho, i-pergola yomthunzi.
Kunikwe iitawuli kunye namaphepha.
Incwadi ekhoyo yokuhlola ummandla kwaye ngakumbi intlango yaseGorafe ngokuzimeleyo.
Ipropathi ekwi-5 km ukusuka kwidolophu eyimbali yaseBaza, kwindawo encinci ye-oasis yokuzola.
Siyawuthanda ummandla wethu, sifuna ukwenza ukuba ufumane iindawo ezingaqhelekanga, usithembe, awuyi kudana.
Ugcino-ndawo: Iikhalenda zethu zisexesheni, sebenzisa "ukubhukisha kwangoko" kuka-Airbnb ngaphandle kwengxaki.
Inombolo yomthetho: VTAR/GR/00640